ကင်ဆာရောဂါခံစားနေရတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူကို အော်စကာ စင်မြင်ပေါ်ကနေစနောက်လှောင်ပြောင်တဲ့ အတွက် Chris Rock ကို စင်ပေါ်ထိတက်ပီး ပါးတက်ရိုက်လိုက်တဲ့ Will Smith (ရုပ်သံ) – Shwe Likes
ယမန်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ (၂၀၂၂) အော်စကာပွဲ ရုပ်သံအစီ အစဉ် မှာ Chris Rock နဲ့ Will Smith တို့ နှစ်ဦး ရဲ့ ခိုက်ရ န်ဖြစ်ပွားမှု ဟာ ပရိတ်သတ်များ အကြား အေ တာ်လေး ဂယက်ထ နေပါတယ်။
အဆိုပါ ခိုက်ရန်ဖြစ် ပွားမှု စတင်ခဲ့ တာကတော့ Chris Rock ဟာ အော်စကာ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် အတွက် တင်ဆက်ပြသရန် စင်မြင့်ေ ပါ်တွင် ပေါ်လာခဲ့ပြီး Will Smith ရဲ့ မိန်းမ Jada Pinkett Smith အကြောင်းကို
ဟာသအနေနဲ့ လှောင်ပြောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ် လို့သိရပါတယ်။ Chris Rock ဟာ Will Smith ရဲ့ မိန်းမ Jada Pinkett Smith ရဲ့ ခေါင်းရိတ်ထားခြင်းကို
“G.I. ဂျိန်း” ဟုဆိုကာ လှောင်ပြော င်ခဲ့တဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမတော့ အကုန် လုံးက ဒါကို ဟာသတစ်ခု လို့ထင် ရပေမယ့် Smith က သူ့ထိုင်ခုံကို ပြန်လာပြီး “မင်းရဲ့ ပါးစပ်ထဲက ငါ့မိန်းမနာ မည်ကို ထားလိုက်ပါ” လို့ Rock ကို အော်ေြ ပာပြီးနောက် Smith ဟာ Rock ကို ရိုက်ဖို့ စင်မြင့်ပေါ်သို့ တက်ခဲ့တာြ ဖစ်တယ်လို့သိရပါ တယ်။
အဆိုပါ ခိုက်ရန်ဖြစ် ပွားမှုကြောင့် အော်စကာ ဆုပေးပွဲရှိ ပရိသတ် အများအပြားဟာ ထိတ်လန့်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ Smith က Chris ကို ပါးတက်ရိုက်ခဲ့ တဲ့ရုပ်သံကိုလည်း ပရိတ်သတ်များ ကြည့်ရှုနိုင်စေရန်ဖော်ပြ ထားလိုက်ပါတယ်။ Credit;
ယမန္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ (၂၀၂၂) ေအာ္စကာပြဲ ႐ုပ္သံအစီ အစဥ္ မွာ Chris Rock နဲ႔ Will Smith တို႔ ႏွစ္ဦး ရဲ့ ခိုက္ရ န္ျဖစ္ပြားမႈ ဟာ ပရိတ္သတ္မ်ား အၾကား ေအ တာ္ေလး ဂယက္ထ ေနပါတယ္။
အဆိုပါ ခိုက္ရန္ျဖစ္ ပြားမႈ စတင္ခဲ့ တာကေတာ့ Chris Rock ဟာ ေအာ္စကာ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ အတြက္ တင္ဆက္ျပသရန္ စင္ျမင့္ေ ပၚတြင္ ေပၚလာခဲ့ၿပီး Will Smith ရဲ့ မိန္းမ Jada Pinkett Smith အေၾကာင္းကို
ဟာသအေနနဲ႔ ေလွာင္ေျပာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ လို႔သိရပါတယ္။ Chris Rock ဟာ Will Smith ရဲ့ မိန္းမ Jada Pinkett Smith ရဲ့ ေခါင္းရိတ္ထားျခင္းကို
“G.I. ဂ်ိန္း” ဟုဆိုကာ ေလွာင္ေျပာ င္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
ပထမေတာ့ အကုန္ လုံးက ဒါကို ဟာသတစ္ခု လို႔ထင္ ရေပမယ့္ Smith က သူ႔ထိုင္ခုံကို ျပန္လာၿပီး “မင္းရဲ့ ပါးစပ္ထဲက ငါ့မိန္းမနာ မည္ကို ထားလိုက္ပါ” လို႔ Rock ကို ေအာ္ေျ ပာၿပီးေနာက္ Smith ဟာ Rock ကို ရိုက္ဖို႔ စင္ျမင့္ေပၚသို႔ တက္ခဲ့တာျ ဖစ္တယ္လို႔သိရပါ တယ္။
အဆိုပါ ခိုက္ရန္ျဖစ္ ပြားမႈေၾကာင့္ ေအာ္စကာ ဆုေပးပြဲရွိ ပရိသတ္ အမ်ားအျပားဟာ ထိတ္လန႔္သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ Smith က Chris ကို ပါးတက္ရိုက္ခဲ့ တဲ့႐ုပ္သံကိုလည္း ပရိတ္သတ္မ်ား ၾကည့္ရႈနိုင္ေစရန္ေဖာ္ၿပ ထားလိုက္ပါတယ္။ Credit;